Abalimi bengqolowa kunye nengqolowa bakulumkele ukutya okuziinkozo
Indoda enye inokuziva ipholile kakhulu xa iinkozo ezinjengembona okanye ingqolowa zihamba njengamanzi okanye isanti kwiminwe nasezinyaweni zayo.. Into abantu abaninzi abayilibalayo okanye abangayiqondiyo kukuba ukukhawuleza kokutya okuziinkozo kungamhlisa umntu kwimizuzwana embalwa, ngakumbi xa ingqolowa ikhutshiwe ukusuka ezantsi njengakwibhinari yengqolowa okanye kwinqwelo yokudla okuziinkozo.
Nje ukuba indoda enye irholwe phantsi kwingqolowa, kunokuba yinto engenakwenzeka ukuba akhuphe umntu ngaphandle. Nditsho nomntu ongcwatywa kuphela ezinkozweni inkunkuma yakhe, idinga amakhulu eepawundi amandla okudonsa ukuze awakhuphele ezinkozweni, Umgubo ongaphezulu kunowomntu omnye unokuvelisa ukuhlangula omnye umntu okanye bona ngokwabo kwingqolowa enkulu. Uxinzelelo olubekwa ziinkozo emzimbeni womntu oluye lwangcwatywa phantsi kwee-intshi ezininzi zeenkozo zisebenza njenge-boa constrictor. Njengomntu ophefumlayo, iinkozo ziqhubelelela emzimbeni ukuzalisa indawo eyayikade ihleli esifubeni somntu eyandisiweyo. Nje ukuba iinkozo zisendaweni, umntu akasakwazi ukuphefumla kwakhona kwaye umntu uya kuphelelwa lixesha ngenxa yokunqongophala kweoksijini. Oku kunokwenzeka ngokukhawuleza. Oko kuqale ukuzonwabisa kunokuphelisa kabuhlungu.
Zininzi iindlela umntu anokungcwatywa ngazo, okanye ubanjwe ziinkozo ezinkulu. nini Umntu
1. imile phezu kwengqolowa enkulu eshukumayo okanye esukela emazantsi emfumba.Iinkozo eziqukuqelayo zisebenza njengentlabathi egelezayo ekhawulezayo kwaye zimngcwabe umntu nje imizuzwana embalwa..
2. ime phezu okanye ngezantsi kwemeko yokuvalwa kwebrid. Ibhulorho yenzeka xa ingqolowa ihlangana kunye, ngenxa yokufuma, ebeka indawo engenanto phantsi kwengqolowa njengoko ithululwayo. Ukuba umntu ume phezu okanye ngezantsi kwengqolowa ebomvu, inokuwa, mhlawumbi ngokungalindelekanga, ukungcwaba umntu
3. imi ecaleni kwengqokelela yeenkozo eqokelelweyo ecaleni kwebhedi. Ipumba yeenkozo inokuwela emntwini ngokungalindelekanga okanye xa umntu efuna ukuyikhupha.
Ukudla okuziinkozo akuyi kuxhasa ubunzima bomntu obuya kutyhiliza umntu buye kwizisele ezikhulu xa zihamba.
Uphando lubonakalisile ukuya kuthi ga 400 lbs. Amandla okutyhala ayafuneka ukukhupha umzimba kwiinkozo ezinzulu ezinqeni. Ngaphezulu kokunyanzelwa ngokwaneleyo ukuba ungonakalisi isigxina somqolo.
Abalimi bengqolowa kunye nengqolowa: Qaphela,kunye nokusebenza okukhuselekileyo malunga neenkozo ezinkulu okanye ukugcinwa kweenhlamvu ezinkulu